လုပ်ပွဲကစားလို့ WePlay! Dota2 ပြိုင်ပွဲမှ ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့အသင်း
အွန်လိုင်းလိဂ်ပုံစံကျင်းပနေတဲ့ WePlay! Dota2 ပြိုင်ပွဲရဲ့ Division2အဆင့်မှာ Cyber TRAKTOR အမည်ရ အသင်းကို လုပ်ပွဲကစားတယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး ပါဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။
CIS အခြေစိုက် Cyber TRAKTOR အသင်းမှာ နာမည်ကြီးကစားသမားတွေမပါပေမယ့် WePlay! လိဂ်ရဲ့ ဒုတိယတန်းလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ Division2မှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရင်း အခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ နှစ်ပွဲသာ ကစားရသေးပေမယ့် Cyber Legacy အသင်းနဲ့ကစားရာမှာ တစ်သင်းလုံး သို့မဟုတ် အသင်းသားအချို့ဟာ အားကစားစိတ်ဓါတ်နဲ့ မယှဉ်ပြိုင်ဘဲ အရှုံးပေးခဲ့တယ်လို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။
Dota2 လောကမှာတော့ ဒီလိုလုပ်ပွဲကစားတာကို 322 လို့ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က CIS ကစားသမား “Solo” ဟာ Team RoX နဲ့အတူ ကစားနေရင်း တစ်ဖက်အသင်းဘက်က အလောင်းအစားပြုလုပ်ကာ $322 နိုင်ကြေး ရရှိခဲ့ရာက စတင်ခဲ့ပါတယ်။ Solo ကို ထိုစဉ်က တစ်သက်တာကစားခွင့်ပိတ်ခဲ့ပေမယ့် နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ Valve က ပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးခဲ့တာကြောင့် အခုချိန်မှာ Virtus.Pro အသင်းရဲ့ ကပ္ပတိန်အဖြစ် အောင်မြင်မှုရရှိနေပါပြီ။
Cyber TRAKTOR အသင်းမှာ Retsu, bobruha, FeedOne, savage, qazer တို့ပါဝင်ပြီး Vikin.gg, Aggressive Mode, Cyber Legacy တို့လို နာမည်ကြီးအသင်းတွေနဲ့အတူ WePlay! Pushka League ရဲ့ Division2မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေကြတာပါ။ NOVA အသင်းကို ၂ ပွဲပြတ်အနိုင်ရထားပေမယ့် Cyber Legacy ကို သံသယဖြစ်ဖွယ် ၀ - ၂ နဲ့ ပြန်လည်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် သူတို့ရဲ့ အပြုအမူကို ချက်ချင်းစစ်ဆေးခံခဲ့ရပြီး အပြစ်ရှိတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက် WePlay! League က တစ်သင်းလုံးကို ဆက်လက်ပါဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။
ရုရှနာမည်ကျော် Dota Analyst တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ V1lat ကလည်း ဒီစုံစမ်းမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး Cyber Legacy နှင့် VP.Prodigy အသင်းများဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ Cyber TRAKTOR ရဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဟာ အလောင်းအစားပြုလုပ်ခဲ့တာကို အလောင်းအစားဝက်ဆိုက်များရဲ့အကူအညီနဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကစားသမားတစ်ယောက်တည်းနဲ့ လိုချင်တဲ့ ရလဒ် မထွက်ပေါ်နိုင်တာကြောင့် ကျန်တဲ့အသင်းသားတွေလည်း ပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့တာပါ။
Cyber TRAKTOR အသင်းကတော့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းချက်မထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။ Valve အနေနဲ့ လာမယ့်နှစ်မှာ ဆုကြေးငွေကို အကြီးအကျယ်လျော့ချပြီး ဒေသအလိုက်လိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် အခုလို 322 ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြတာ အနည်းအကျဉ်းရှိတာကြောင့် ယခုဖြစ်ရပ်ကို နမူနာယူပြီး အနာဂါတ်မှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ထားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။